Zanu-pf Party News - The latest news from TRT World
Showing 16 results related to "ZANU-PF party".
Zimbabwe's ex-leader Mugabe buried at his rural village
Robert Mugabe, who led the bitter guerrilla war to end white-minority rule in the country, was Zimbabwe's first leader and ruled from 1980, overseeing a years-long slide from prosperity to economic ruin and repression.
Zimbabwean Afro-jazz legend 'Tuku' dies aged 66
Oliver Mtukudzi, who generally steered clear of politics in his songs and won a following across the continent and beyond, died in capital Harare.
Three people were killed in Zimbabwe's capital city of Harare in clashes with police during protests by opposition supporters angry at what they claim was a rigged election.
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa delivered his first state of the nation address since he assumed power last month following a de facto coup that ousted his 93-year-old predecessor Robert Mugabe.